MUUQAAL: Shariif Xasan oo Sharaxay Sababta uu isku Casilay iyo Guusha ay Gaadhay Xukuumadda Soomaaliya | KALSHAALE
MUUQAAL: Shariif Xasan oo Sharaxay Sababta uu isku Casilay iyo Guusha ay Gaadhay Xukuumadda Soomaaliya
Nov 7, 2018 - 6 Aragtiyood
Baydhabo ( Kalshaale ) Shariif Xasan sheekh Aadan Madaxweynaha uu waqtigu ka dhammaaday ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta ku dhowaaqay inuu iska Casilay Xilkii, Sidoo kalana uu ka hadhay Doorashada, Wuxuuna Warbaahina u sharaxay sababta uu go’aankaasi ku Qaatay.
“Inaan ka hadho Musharaxnimada waa la igu Kalifay, Hadii Baarlamaankii Koonfur Galbeed Ogolaadeen inay Xamar tagaan, Aniguna waan Ogolaaday inaan ka Tanaansulo Musharaxnimadii Doorashada 17-ka Bisha “ ayuu Yidhi Shariif Xasan
Hadda oo ay laba sano uga harsan tahay waqtiga ay talada hayaan, waxaa muuqata in inta badan ama dhammaan maamulada noqon doonaan kuwo ku siyaasad ah Madaxtooyadda Soomaaliya.
Ciidankii la dhisahayey waxaa cuney Casilaad,
No Siyaaro Addiss
No Federaal maleeshiyo beeleed
No Madaxweynaha Madaxweyneyaasha maamul Dowladeedka, Dalka Soomaaliya.
Sidaan ugu sheegney Waare,Xaaf iyo Shariif, ayagey jirtaa Gaas iyo Axmed Cadde waxey yeelidoonaan. Dooli iyo Basal dabin kor saaran, doolibey dantiisa tahey inuu basal ka tanaasulo.
– Madmadoobe waa isoo karey
Shalay,waxaan arkayay Mr Gaas oo sii sagootinaya ninkii Tegreega ahaa ee Garoowe u fadhiyay Taliskii hore ee xaraanta haa ee Tegreega.Runtii Mr Gaas aadbuu u murugaysnaa.
This Inangumeed’s era of Somaliya is going down Hill.
Gaas wuxuu ku yimid codka baalamaanka puntland. Wuxuu ku joogi karaa isagoo mar labaad cod hela. wuxuuna ku baxayaa isla codkaa hadii laga guuleysto.
Dadka ku riyoonaya Gaas baa sida shariif is casilaya waa dad riyo ku jira.
Teeda kale Gaas hadii xitaa uu baxo wax iska badalaya hadafka iyo siyaasada ku aadan qolada Nabar iyo Naxdin ma jidho.
Shalay Faroole ayaa laga qaylinayey Maanta Gaas ayaa laga qaylin Berina Ninka imaanaya sidaa ayaa looga qaylin.
Kori hoos ma idiin dhaantaa soo socda
Aniga ma fahmin, Mr Bahal iyo Dabshid maxay ka hadlaan.
Maxaa sheekada Shariif Sakin oo iscasilay sax u arko iyo Puntland iyo Gaas iska galay?
Puntland doorasho ayey gelaysaa nin kusoo bixi doono ma ogi laakiin mid baan ogahay in dastuurka Puntland kii yimaada ku socon!
Down hill iyo blahoo blahoo.
Dad iska hadla mise waa lasoo waalan rabaa?
Gaas hadduu tago iyo hadduu joogo nothing will change.
You need to learn: what inan-gumeed means, waa eray reer Mudug-reer Bari keenen.. Waa dadka laga tirada badan oo power lahayn sida adiga oo cabaadkii kaa dhamaaday.
Gob waa rag tashaday oo powerful ah, in hoos laga necbaado oo la habaaro mooyee tabar kale loo waayey…
Allow gun ha naga dhigin: By Cigaal Caymo AUN.
Inangumeed waa ninka xun,bilaa dhaqanka ah ee cuna wax aanay dadku gayin.Aarsaaqad ka raadsada meelo xaraan ah.
Badida iyo yaraanta Gob laguma noqdo,Gunna laguma noqdo.Gob,waa wanaaga.Gunna waa xumaanta.
Dadka Gobta ah ayay wax u kala soocanyihiin.Adiga waxba kuuma kala soocna.
Uuska xoolaha ayaad biyaha ka cabtaa.Inangumeedka waa noocaasi.
Gaas waa Inangumeed adna waad ku jirtaa.